မြောက်ဦးဖြစ်စဉ် အပါအဝင် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတွင် တာဝန်ရှိ၊ မှားယွင်းမှုများ ရှ?? - Yangon Media Group
စစ်တွေ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂
မြောက်ဦး ဖြစ်စဉ်အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတွင်တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မှားယွင်းမှုများရှိခဲ့လျှင် အရေးယူခံရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် ညနေပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ(၁) တွင် စစ် တွေအခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စစ်တွေ မြို့မိမြို့ဖများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းသို့ ပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည်။
”ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော် ကြုံတိုင်းလည်း ပြောပါတယ်။ တာဝန်ရှိတယ်။ တာဝန်ယူတယ်။ တာဝန်ခံတယ်။ တာဝန်ကျေအောင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ တာဝန်မကျေတာတွေ၊ ပျက်ကွက်မှုတွေ၊ မှားယွင်းမှုတွေ ဒါတွေရှိခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော် အရေးယူခံဖို့ အဆင်သင့်ပါ” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုက ပြောသည်။ ယင်းနေ့ကပြုလုပ်သည့် ရှင်း လင်းပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများက မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြေပြင်အခြေအနေနှင့် အစိုးရ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ကွဲလွဲမှုများရှိနေသည့်အတွက် ပြည်သူများ သံသယရှင်းလင်းစေနိုင်ရန် လွတ်လပ်ပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ”ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ် အောင်လွတ်လပ်မျှတပြီးတော့ သမာသမတ်ကျတဲ့ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဒါကိုစုံစမ်းခိုင်းလိုက်ရင် မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်” ဟု ရှင်းလင်းပွဲတက် ရောက်ခဲ့သည့် စစ်တွေလူမှုအဖွဲ့ အစည်းများကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုက ”လွတ်လပ်တဲ့ စိစစ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်အဆင့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ပြည်ထောင်စုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာကျရောက်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို ဒီနေ့ တင်ပြချက်တွေအပါအဝင် ပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ အလေးအနက်ထားပြီးတော့ ဒီကော်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရေးကို တင်ပြသွားဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြန်လည်တုံ့ ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မြောက်ဦးဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဦးရဲတပ် ဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီ၊ မညီဆိုသည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဒုတိယပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ခုက ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် မှ စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ် နေပြီဖြစ်သည်။ မြောက်ဦးမြို့တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် ညက လူထုအုံကြွမှုတစ် ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က လူစုခွဲဖြိုခွင်းရာ အရပ်သား ခုနစ်ဦးသေဆုံးကာ ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ဝ လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရေး တိုက်တွန်းကြေ?
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအသစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံ?
မီးပလတ်ခုံ၌ စုပြုံအားသွင်းရာမှ သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် မီးလောင်